Oovimba baseJamani-Funda ukuRhweba
IJamani inyanzelisa umthetho ukuvumela iiNkampani zoTyalo-mali zibambe iipesenti ezingama-20 zePotifoliyo kwiCrypto
Ngokwengxelo zamva nje, umthetho omtsha uza kuqala ukusebenza kwiveki ezayo, eza kuvumela iinkampani zotyalo-mali eJamani ukuba zibambe ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-20 zeeasethi zabo kwiiasethi zedijithali. Olu phuhliso lutsha luza phakathi kwemfuno ekhulayo evela kumaziko aliqela ukuya kushishino.
Ngokusekwe kwingxelo yeBloomberg ngoJulayi 30, i-Spezialfonds, ingxowa-mali yotyalo-mali yaseJamani enemithetho emiselweyo, ngoku inokwabela i-20% yeemali zayo kwi-cryptocurrensets. Eli qela leenkampani zotyalo-mali lilawula malunga ne- € 1.8 trillion okanye i- $ 2.1 trillion kunye neenkonzo kuphela zabatyali mali bamaziko.
Ngokuka-Tim Kreutzmann, ingcali ye-cryptocurrency kwi-BVI, uninzi lwezi mali luya kukhetha ukuqala ngexabiso elincinci emva koko linyuke. Uye waphawula ukuba:
“Inkoliso yemali iya kuhlala ingaphantsi kwamanqaku angama-20%. Kwelinye icala, abatyali mali bamaziko afana neinshurensi baneemfuno ezingqongqo zolawulo kwizicwangciso zabo zotyalo mali. Kwaye kwelinye icala, kufuneka bafune ukutyala imali kwi-crypto. ”
Ngaphandle kwenyathelo lokuxhokonxwa kukwanda kwebango leziko, uKamil Kaczmarski, isigqeba senkampani yabacebisi uOliver Wyman LLC, wathi abatyali mali bayathandabuza malunga nemali ezigcina imali ngenxa yobume babo obungazinzanga. UKaczmarski wongeze ukuba le meko inokuqhubeka kule minyaka mihlanu izayo okanye kunjalo.
Amaziko ezeMali eJamani akholelwa kwi-Cryptocurrency
Isithethi siqaphele ukuba umphathi weeasethi ze-Deutsche Bank AG i-DWS Group kunye ne-DekaBank, elinye lamaziko aphezulu ezemali eJamani, bobabini babonakalise umdla wotyalo-mali kwii-cryptocurrensets.
Ngomhla ka-Meyi, iziko lezemali laseJamani i-Deutsche Bank laqinisekisa inkxaso yalo kwi-cryptocurrensets. Emva phaya, uChristian Nolting-iGosa eliyiNtloko loTyalo-mali kule nkampani-waqaqambisa uqikelelo lokukhula kweshishini kule minyaka idlulileyo, ngakumbi ngexesha lobhubhane we-COVID-19. Uye waphawula ukuba ii-cryptocurrensets ziya kuhlala ixesha elide, esithi:
"Ndicinga ukuba ngoku, kuyacaca ukuba i-cryptocurrensets (ngandlel 'ithile) ilapha ukuze ihlale, kodwa ndingatsho ukuba bakude nodidi lweeasethi."
tags Cryptocurrency, Jemani , iindaba
I-DAX 30 ibonisa Iimpawu zokuDinwa!
Ukuhlaziywa: 21 April 2021
I-DAX 30 yesalathiso sesitokhwe sehla ngexesha lokubhalwa emva kokufikelela kwinkcaso yenyanga. Ngokwenyani, ukuhla okwethutyana kunokuba yinto yendalo. Ukubuyela umva kunokusinceda ukuba sibambe amandla aphezulu.
Njengoko sele uyazi, isalathiso saseJamani sibhalise ixesha elipheleleyo lonke eliyi-15,521.6, ke kuyingozi ukuthenga kule ndawo iphezulu. Isigaba sokulungisa sinokuzisa amathuba amatsha kungekudala.
I-DAX 30 ithengiswa kwinqanaba le-15,112 kwaye inokutsibilika isezantsi emva kokusilela ukuzinza ngaphezulu kwe-R1 (15,447). Umgca wokunyuka kwangoko ubonwa njengento ebalulekileyo ekujoliswe kuyo kwixesha elizayo. Kwakhona, isalathiso singasondela kwindawo yepivot yeveki (14,641) emva kokubhalisa ukuphuma ngobuxoki ngaphezulu kwe-R1.
Imbonakalo iyenyuka nangona ukuhla kungoku. Iphethini enkulu yokuguqula kunye nethontsi elingaphantsi kwamanqanaba enkxaso eyomeleleyo eya kuthi ibonakalise ukuba i-DAX 30 inokukhulisa ukuhla okukhulu.
Unokujoyina iqela lethu le-VIP APHA ukuba ufuna ukufumana ukuthengwa okanye ukuthengisa imiqondiso kwi-DAX30.
tags idayx 30, I-DAX30, Isalathiso semarike yaseJamani, Jemani
IJamani iyalunciphisa uqikelelo lokukhula, i-UK inyanzelisa ulawulo lweMida
Ukuhlaziywa: 27 January 2021
Idola, i-yen, kunye ne-franc yaseSwitzerland yomelele kwakhona namhlanje njengoko ukuwa kwezitokhwe zaseYurophu kuye kwathamba. Imood ithanjisiwe sisicwangciso se-UK sokuzisa amanyathelo angqongqo emida.
IJamani inciphisile ukukhula kwayo kulo nyaka. Iimali zezinto zorhwebo ziye zancipha ngokuhambelana nomngcipheko ngokubanzi.
Urhulumente waseJamani usike ukukhula koqikelelo lwe-2021 ukuya kwi-3%, ngokuthe kratya ngezantsi kwengqikelelo yokuwa ye-4.4% ngenxa yomjikelo wesibini wokubekwa ecaleni kwe-coronavirus.
Ukuzithemba kwabathengi kwi-Gfk eJamani kwehle -15.6 ngoFebruwari ukusuka -7.5, ngaphantsi kwe -7.8 uqikelelo. NgoJanuwari, ulindelo lwezoqoqosho lwehle ukusuka ku-4.4 ukuya ku-1.3. Ukulindela ingeniso kwehle ukusuka ku-3.6 ukuya ku--2.9. Ubungakanani bokuthenga buhle ukusuka kwi-36.6 ukuya kwi-0.0.
URolf Bürkl, iGfK Consumer Expert: “Kwikota yokuqala yalo nyaka, iimvakalelo zabathengi zijongene nemiceli mngeni emikhulu. Ukufumana kwakhona okuzinzileyo, amaqondo osulelo kufuneka ehle ngaphezulu kunokuba kunjalo namhlanje ukuze ungenelelo lunokuncitshiswa kakhulu. Oku kuthetha ukuba kufuneka silinde kancinci ngaphambi kokuba sibone ukubuyiswa abaninzi ababenethemba kulo nyaka. ”
I-UK inyanzelisa uLawulo lweMida
Inkulumbuso yase-Bhritane u-Boris Johnson uthe ngolwesiThathu abaphathiswa bazakubhengeza amanyathelo emida anzima kwangolo suku. Kwiintsuku nje ezili-10 ngaphambi kokwahlulwa okokuqala ku-Covid-19 ngo-Matshi ophelileyo, i-UK iwushiyile umgaqo-nkqubo wexesha elifutshane wokwahlukanisa abahambi kwiindawo eziyingozi zaphesheya kolwandle.
Ngelixa amanye amazwe ebeke imiqobo engqongqo yokuhamba ukubulala ubhubhane, iDowning Street khange imisele amanyathelo emida phantse iinyanga ezintathu phambi kukaJuni. Le yayiyindlela "engaqhelekanga", ngokwengxelo eyoyikisayo yepalamente eyakhutshwa kunyaka ophelileyo.
Incoko malunga nezopolitiko zase-Bhritane zokutyhala ukuvalwa ngokupheleleyo kwemida kunye ne-coronavirus eyoyikekayo (i-COVID-19) e-UK kubonakala ngathi ngumceli mngeni weenkunzi zamva. Nangona kunjalo, imeko yomngcipheko evela kurhulumente omtsha e-US inyanzela iikowuti.
tags Jemani , Umda wase-UK
Iibhanki zaseJamani zinokuthi ngoku zilungele ukuLawula ii-Cryptocurrensets
Ukuhlaziywa: 29 Novemba 2019
Umthetho osayilwayo omtsha uthathelwa ingqalelo eJamani onokuthi ubone iibhanki zibe ngabaphathi kunye nabarhwebi beBitcoin kunye nezinye ii-altcoins nge-2020.
Ngokusekwe kukukhutshwa kweendaba nguHandelsblatt ngomhla wamashumi amabini anesixhenxe kuNovemba, umthetho osayilwayo ngoku ufuna imvume kumazwe ali-27 kweli, ngoku sele upasisiwe yiPalamente yaseGerman.
Okwangoku, iibhanki eJamani azinalo ilungelo elisemthethweni lokuqhuba ngokuthengisa ii-cryptocurrensets kubathengi bayo. Lo mthetho uyilwayo, ukuba uphunyeziwe, uza kubona utshintsho olukhulu koku.
Ekuqaleni, uyilo lwantlandlolo lomthetho oyilwayo luqulathe "igatya lokwahlulahlula" eligunyazisa ukuba iibhanki zikhuphe imisebenzi yorhwebo ye-cryptocurrency kubantu abaziwayo abagcina i-crypto okanye ababonelelwe ngenkxaso-mali, nangona kunjalo, eli gatya licinyiwe kuhlobo lwamva nje lomthetho oyilwayo. I-Handelsblatt ibhengeze ukuba olu phuhliso luza kwenza lula imisebenzi enxulumene ne-crypto yeebhanki njengoko iibhanki ngoku zinokuhambisa ukubhenka kwi-Intanethi ngesantya sombane kwii-cryptocurrensets nakwezinye izinto ezikhuselekileyo ezinje ngesitokhwe kunye neebond kubathengi bayo.
Umthetho osayilwayo omtsha ubangele isiphithiphithi sovuyo kwicandelo lezasekhaya.
INtloko yokuHanjiswa kweeLebhu eziHanjisiweyo, uSven Hildebrandt, uqinisekisile ukuba ngolu phuculo, iJamani iya kubekwa kwindawo apho izakuthathwa njengendawo yokufihla ulwazi. USven uyabandakanyeka kulawulo lwemali yedijithali kweli lizwe.
Umbutho weeBhanki zaseJamani, ngokungathandabuzekiyo, uyayixhasa kwaye iphembelela umthetho oyilwayo, inyanzelisa ukuba iibhanki zixhotyiswe kakuhle ukuphatha le projekthi.
Nge-Okthobha, uMbutho usasaze iphepha eliqinisekisa ukuba uqoqosho lwaseYurophu "lufuna i-Euro efakwe kwikhompyutha".
Ngelishwa, iBundestag kutsha nje ibhengeze kwisibhengezo sokuba ayithathi imali eyi-cryptocurrensi njenge "mali yokwenyani" iqaphela imeko yabo eguqukayo kunye nokusetyenziswa kwayo okusikelwe umda. Isibhengezo sikwakhankanye ukuba sijonga ii-Stablecoins njengezoyikisayo, sigxininisa amandla aso okonakalisa ulawulo lwangoku lwemali.
tags Cryptocurrency, Jemani , Stablecoins